Pierre-Emerick Aubameyang oo indhaha ku haya inuu u dhaqaaqo dalka Spain… (Kooxdee ayuu ku biirayaa ma Real Madrid mise Barcelona?) – Gool FM
(London) 12 Sebt 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa la soo warinayaa inuu doonayo inuu u dhaqaaqo dalka Spain, isagoo xiiseynaya inuu ku biiro naadiga Real Madrid ee ka dhisan caasimadda dalkaasi.
Xiddiga xulka qaranka Gabon ayaa si xoog leh loola xiriirinayey inuu u dhaqaaqi doono garoonka Bernabeu ka hor inta uusan Gunners kaga soo biirin kooxda Borussia Dortmund intii lagu guda jiray suuqii kala iibsiga bishii Janaayo ee sanadkii la soo dhaafay.
Aubameyang ayaa dhaliyey 44 gool 69 kulan oo uu u saftay Arsenal tartammada oo dhan, waxaana dhawaan la sheegay in 30-sano jirkaani uu ku dhow yahay inuu qandaraaska u kordhiyo kooxda ka dhisan Magaalada London.
Si kastaba ha ahaatee, sida ay uu warinayo Warsidaha Defensa Central, Weeraryahankan qibradda leh ayaa xiiseynaya rajada ah inuu ku biiro kooxda uu hoggaamiyo Tababare Zinedine Zidane.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Aubameyang uu xitaa Dani Ceballos oo haatan amaah ugu ciyaara Gunners, kaasoo ay milkiyaddiisa leedahay Real Madrid wax ka weydiiyey xaaladda iyo wax ku saabsan garoonka Bernabeu, isagoo ka fiirsanaya inuu u dhaqaaqo Los Blancos xilliyada dhow.
Weeraryahankan kaasoo dhaliyey saddex gool afar kulan oo uu u ciyaaray horyaalka Premier League kooxda uu hoggaamiyo macallin Unai Emery xilli ciyaareedkan ayaa sidoo kale la la xiriirinayey Manchester United intii lagu guda jiray suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga.